Khabiirka Kala Duwan: Waxyaabaha Kale ee Waddada SEO ee Maqnaanshaha Aan ka Fureen Ereyada
Hagaajinta SEO waxay ku tiirsan tahay ereyada la doortay iyo sida website-yada Isku-dubarid labadaba goob-jooge iyo dib-u-habeyn goobeed. Isticmaalka ereyada muhiimka ah waa qayb muhiim ah oo ka mid ah geedi socodka SEO. Haddii loo isticmaalo meel muhiim ah Istaraatiijiyada, waxay mararka qaarkood ka shaqeyn kartaa badeecada. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee ereyada muhiimka ah waxay keeni kartaa ciqaab, ama waxaa laga yaabaa in ay midba midka kale ku mashquuliso kuwaas oo ka shaqeynaya qaybaha muhiimka ah ee muhiimka ah. Calaamadaha daruuriyeyaashu waa in ay diirada saaraan waxyaabo badan oo isdaba-joog ah ee goobta ku yaala (8
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,Frank Abagnale wuxuu sharaxayaa waxa laga yaabo in qaabka ugu fiican ee loo adeegsan karo ay yihiin kuwa ugu muhiimsan.
Muujinta mawduucda waxay ka muhiimsan tahay ereyada muhiimka ah
Goobta ereyada muhiimka ah ee bog kasta oo arrimahaa ka badan imisa jeer ayey u muuqdaan. Tusaale ahaan, madaxa waa ka qiimo badan yahay kubbadda, ama qaybta dhexe ee dheeraadka ah ee macluumaadka. Qodobbada muhiimka ah ee qoraalka ku jira waxay ka beddeli karaan tayada, la wadaagi karo, iyo qiimaha qiimaha laga helo dhismaha goobta
Falanqaynta Naqshadaynta iyo Muuqaalka Muuqaalka
Google ayaa ku wareegay isticmaalka eray-ereyada muhiimka ah sida block samee isbarbardhig hal-ka-fool ah oo ka dhan ah weydiimaha raadinta. Taa baddalkeeda, koofiyadaha raadinta ee Google waxay sameeyaan su'aalo aad u ballaaran oo ku saabsan jumlado dheer oo ay ku dhistaan Ujeedada goobta. Waxay u malaynaysaa isticmaalka semantic ee luuqada, lana midabtako arimahan ku habboon, habka loo yaqaan 'semantic' Raadi. Faa'iidada raadinta semantic waa inuusan ku xirnayn macnaha ereyga muhiimka ah ee loo isticmaalo ilaa inta ay ku haboon tahay macnaha guud ganacsiga..Milkiilayaasha ganacsatadu waxay haatan diiradda saari karaan waxa macno u leh ganacsigooda iyo astaanta
Bogagga iyo Qaabdhismeedka Qalabka
Meeluhu waa inay si fudud u galaan dadka isticmaala si ay u helaan fahmaan sida loo helo. Google wuxuu xoojinayaa tan iyadoo la hubinayo in boggaguna si sahlan loo socdo. Shabakad nadiif ah oo habaysan, a nadiifin oo soo koobaya habka navigation oo ay ku jiraan guulo badan oo hooseeya oo ka badan goobta oo la xidhiidha isku xirnaanta dhammaan shabakada. Calaamadaha iyo ikhtiyaaraadka caadiga ah ee doorashooyinka sida "Contact, About, and Services pages waa kheyraad aad u fiican. Mawduuca bogga maaha mid ku habboon haddii ay jirto waa qaab dhismeed xoog leh oo mug leh.
Xawaaraha iyo Ammaanka Bogagga
Kordhinta tartanka iyo helitaanka qalab badan ayaa dhalisay ee xawaaraha, kaalinta kaalinta, helitaanka xayiraad badan. Hirgelinta nidaamka kaydka nadiifka ah, yaraynta sawirada, iyo ka takhalusidda baahida aan loo baahnayn Dood-dhaliye waa siyaabo lagu kordhiyo xawaaraha bogga. Ammaanka bogga ayaa sidoo kale muhiim ah, iyo bogagga internetka ee leh SSL codsi (oo loo yaqaan 'https :) waxay ku soo korodhsadeen heerkooda. Qiimaha nabadgelyada goobta ayaa la filayaa inuu kordho wakhtiga uu soconayo.
Awoodda Moobaylku hadda waa lagama maarmaan
Meelo saaxiibtinimo ah oo saaxiibtinimo leh ayaa helaya darajo heer sare ah marka loo eego kuwa aan ahayn. Google waxay soo saartey casriyeyn isbeddel ah sida bogga aan la garaneynin. Google wuxuu ciqaabi doonaa goobo kasta oo sameeya lama kulmin marxaladaha. Inkasta oo goobta uu horey u ahaa mid la wareegay mobile, talaabada Google waa calaamad muujinaysa aragtidooda muddada fog waa in la hagaajiyo waayo-aragnimo user iyo waxyaabo aan muhiim ahayn sida ereyada muhiimka ah.
Sida ugu muhiimsan ereyada muhiimka ah waxay kaa caawineysaa helitaanka sheeko ama bandhig tartan fursadaha, caddayntu waxay muujinayaan in istaraatiijiyooyinka, kuwaas oo ku lug leh hirgelinta ereyga muhiimka ah, ma aha qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqada. Qodobyada kale ee kor ku xusan waxay hagaajinayaan waayo-aragnimadooda, waxay kordhiyaan tayada websaydhka, waxayna ka caawiyaan in laga hortago. Sida ay cadeeyeen macaamiisha Isticmaalka Adeegyada Dijital ah , Arrimaha ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah ayaa saameyn ku leh sumcada website-yada sidoo kale Source .